Mitsubishi Fuso Super Great 2004 (#682111) ကို Mingaladon... | CarsDB
Lot Number: #682111
လက်ငင်း (သို့) HP. အရစ်ကျ. (2)or (3)year. ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
Engine. 380 PS
ရှေ့လေး/ နောက် သုံးဘက်လျှော
နေရာ. 277/ 278. ငုဝါလမ်း. ပုလဲ. (2) ရပ်ကွက်
မင်္ဂလာဒုံ pT power ဆီဆိုင်ဘေးကလမ်းမှ
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Kyaw Min Thein မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mitsubishi Fuso Super Great 2004 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။